Emoji Launcher - Stickers & Themes 1.2.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.3 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Emoji Launcher - Stickers & Themes
Emoji Launcher - Stickers & Themes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Personalise your home screen with Emoji Launcher and enjoy the popular emoji style! Emoji Launcher provides trending emojis & stickers, themes, HD wallpapers and call screen themes.
✔️Stylish themes - Each iconaunique emoji face, give your phoneanew emoji look.
✔️Beautiful wallpapers - Get your phone an amazing background.
✔️Gorgeous caller screen - Personalise the incoming call screen.
✔️3D transition effects - Cool dynamic effects while switching between screens.
- Menu: Long-press on the home screen to quickly access common features
- Unread message: icon badges with the unread message number
😘Join us and find your own home screen style!
အီမိုဂျီတင်ပေးသူနှင့်သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်နှင့်လူကြိုက်များရုပ်ပြောင်စတိုင်ပျော်မွေ့! ရုပ်ပြောင် Launcher ကိုရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများ, themes များ, HD ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်မျက်နှာပြင် themes များကိုပဌနာယိပေးပါသည်။
✔️ ချစ်စရာအီမိုဂျီ GIF များ - ဝေမျှမယ်နှင့်သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိသည်။
✔️ စတိုင် themes များ - တစ်ခုချင်းစီအိုင်ကွန်ထူးခြားတဲ့ရုပ်ပြောင်မျက်နှာ, သင့်ရဲ့ဖုန်းအသစ်တခုရုပ်ပြောင်ကြည့်ပေးပါ။
✔️ လှပသောနောက်ခံပုံများ - သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအံ့သြဖွယ်နောက်ခံကိုရယူပါ။
✔️ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏ screen ကို - ထိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်။
✔️ 3D အကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှု - ဖန်သားပြင်အကြား switching စဉ်ပြောင်းလဲနေသောသက်ရောက်မှု Cool ။
သင့်ရဲ့ home screen က Mange
- စမတ် Folder ကို: ပေါ် မူတည်. ဖိုလ်ဒါသို့ apps များ sort နှင့်သင့် home screen ကိုပြန်စီ။
- Desktop ကိုချိန်ညှိမှုများ: Adjust အိုင်ကွန်အရွယ်အစား, စာလုံးအရွယ်အစား & အရောင်, home screen ကဇယားကွက်
- Menu ကို: Long-စာနယ်ဇင်းအိမ် screen ပေါ်မှာလျင်မြန်စွာဘုံ features တွေဝင်ရောက်ဖို့
- မျက်နှာပြင် Manager ကို: ဖန်သားပြင်၏စီမံခန့်ခွဲသည့် sequence ကိုနှင့်အရေအတွက်ကို
- မဖတ်ရသေးသည့်သတင်းစကား: အမဖတ်ရသေးသောသတင်းစကားနံပါတ်အိုင်ကွန်တံဆိပ်များ
အဆင်ပြေ Widgets တွေကိုသုံးပါ
- စနစ်နှင့် launcher Widgets တွေလုပ်ဖို့ Widgets ဝင်ပေါက်
- မိုးလေဝသ: ရှေးခယျြသောနေရာများတွင်အဘို့အ Precise ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
- က Wi-Fi ကို, ဒေတာလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, တိုးတက်မှု, CPU အေးနှင့်ဘက်ထရီအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူသတိပေးချက် toolbar ကို
- home screen ကနေပုဂ္ဂလိက app များကို Hide နှင့်အရေးကြီးသော apps များဖွင့်သော့ခတ်။
- အွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ: 20 အထက် H5 ဂိမ်းတွေနဲ့ပျော်စရာရှိသည်!
ကျွန်တော်တို့ကို😘Joinနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Home Screen ကိုစတိုင်လ်ကိုရှာဖွေ!
ဒီ launcher app ကိုသင့်ရဲ့ default home screen ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်နှင့် System Setting ထဲမှာရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ပေးပါ။ ရှာဖွေရေးဘားလည်းအသစ်ဖြစ်၏, ငါတို့သည် app ထဲမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ် Google ကိုသုံးပါ။
Emoji Launcher - Stickers & Themes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Emoji Launcher - Stickers & Themes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Emoji Launcher - Stickers & Themes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Emoji Launcher - Stickers & Themes အား အခ်က္ျပပါ
hon-store စတိုး 23 8.33k
Emoji Launcher - Stickers & Themes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Emoji Launcher - Stickers & Themes အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.2.3
ထုတ်လုပ်သူ Cute Emoji Phone
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://emojiphone.weebly.com
App Name: Emoji Launcher - Stickers & Themes
Release date: 2019-08-08 16:17:10
လက်မှတ် SHA1: ED:C4:76:3E:4F:5A:51:55:02:C2:A3:9F:49:00:0C:98:2D:29:14:FC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): CuteEmojiPhone
အဖွဲ့အစည်း (O): CuteEmojiPhone
နယ်မြေ (L): HK
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): HK
Emoji Launcher - Stickers & Themes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ